Dowladda Soomaaliya oo Ciidamo u dirtay degaankii dadka lagu dilay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Dowladda Soomaaliya oo Ciidamo u dirtay degaankii dadka lagu dilay
Ciidamo ka kala tirsan qeybta 21aad iyo Guutada Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa Maanta gaaray degaanka Xersi lugeey oo hoostaga degmada Balanballe ee Gobolka Galgaduud, halkaas oo shalay Gelinkii dambe lagu dilay Shan qof oo shacab ah.
Taliyaha qeybta 21aad Korneyl Cali Dheere ayaa hoggaaminaya Ciidamada, waxaana ay halkaasi ka bilaabeen howlgallo lagu baadi-goobayo maleeshiyaadkii dadka ku laayay degaanka xersi lugeey.
Taliyaha qeybta 21aad Korneyl Cali Dheere ayaa sheegay in, iyaga oo fulinaya Amarka Madaxda sare ee dowladda & Maamulka Galmudug ay wadaan sidii loo xaqiijin lahaa amniga degaankii wax lagu dilay si gacanta loogu dhigo dadkii ka dambeeyay falkaas.
Saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in degmooyinka Balanballe iyo Guriceel ee gobolka Galgaduud ay gaaraan wafdi heer wasiiro ah so ay uga qeyb qaataan in xiisad kale aysan ka dhalan dadka Shacabka ah ee la dilay.
Halkaan Ka Akhriso Magacyada dadka la dilay
Previous articleCiidamo ka tirsan kuwa Maamulka Galmudug oo gadood sameeyay
Next articleDoorashada Madaxweynaha Uganda oo ku bilaabatay xaalad cabsi ah.